Leonardo Oo Soo Bandhigaya Heshiis Cusub Oo Ku Aadan Neymar, Iyo Kylian Mbappe
Home Suuqa kala iibsiga Leonardo oo soo bandhigaya Heshiis Cusub oo ku aadan Neymar, iyo Kylian...
Agaasimaha isboortiga Paris Saint-Germain Leonardo ayaa xaqiijiyay in kooxda ay “ku farxi karto” xaalada ku aadan heshiisyada cusub ee Kylian Mbappe iyo Neymar .
Labada weeraryahan ayaa haatan lagu wadaa inay noqdaan wakiilo xor ah dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, in kasta oo warbixin dhowaan soo baxday ay muujisay in PSG ay heshiis hordhac ah la gaartay Neymar heshiis cusub oo gaaraya ilaa 2026.
Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka reer Brazil ayaa weli lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo Barcelona , halka Mbappe la fahamsan yahay inuu diirada u saaran yahay Liverpool iyo Real Madrid .
Inkasta oo hubanti la’aan ku hareeraysan tahay mustaqbalkooda, Leonardo wali wuu ku furaxsanyahay xaalada, isaga oo u sheegaya Sky Italia : “Waxaan u maleynayaa in marka ay timaado qandaraasyadooda, aan ku farxi karno … waxaan dhawaan gaari doonaa xaalad adag oo la taaban karo oo ku aadan Mbappe iyo Neymar. qandaraasyada. “
Mbappe iyo Neymar ayaa door muhiim ah ka ciyaaray guushii PSG ee 3-2 ay ka gaartay Bayern Munich lugtii hore ee wareega 8da Champions League, iyadoo ciyaaryahanka reer France uu shabaqa soo taabtay labo jeer halka saaxiibkiis uu isna caawinaad ka helay.
Labada xiddig ayaa isku dar wadar ahaan dhaliyay 45 gool iyo 17 caawin tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, inkasta oo PSG ay seddex dhibcood ka hooseyso kala sareynta hogaankiisa Ligue 1 ka dib guuldaradoodii ugu dambeysay ee ka soo gaartay Lille.
Previous articleManchester united oo qiimo culus duldhigtay xidiga amaahda ku jooga west ham Lingard.
Next articleReal Madrid oo u dabaaldegaysa bandhigii Toni Kroos kulankii Reds.